Arsenal Oo Heshay Fursad Ay Kula Soo Wareegi Karto Andrea Belotti
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo heshay fursad ay kula soo wareegi karto Andrea Belotti
October 5, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka lala xiriirinayo Arsenal Andrea Belotti ayaan u dhawayn inuu heshiis cusub u saxiixo Torino sida lagu sheegay warbixin ugu danbeesay.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaa ka ciyaarayay Turin lixdii sano ee la soo dhaafay ka dib markii uu 2015 uga soo wareegay Palermo, isagoo dhaliyay 106 gool 231 kulan oo uu u saftay kooxda tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska Belotti ee Torino ayaa qarka u saaran inuu dhammaado ololaha hadda jira, sida laga soo xigtay Calcio Mercato , ‘wax walba uma socdaan sida la rabay marka la eego cusboonaysiinta heshiiska.
Arsenal ayaa loo saadaalinayay inay u dhaqaaqdo Belotti xagaaga, Gunners ayaana laga yaabaa inay suuqa ka raadiso weeraryahan cusub 2022, iyadoo Alexandre Lacazette uu u muuqdo inuu si xor ah uga tagi karo.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Inter Milan iyo AC Milan ay labaduba rajeynayaan inay Belotti ku sii hayaan Serie A, inkastoo Atletico Madrid ay sidoo kale xiiso u qabto.
Belotti ayaa shabaqa soo taabtay maalintii furitaanka xilli ciyaareedka 2021-22 Serie A ee Atalanta BC, laakiin tan iyo markaas wuxuu seegay shan ciyaarood oo dhaawac jilibka ah, mana ciyaari doono qeybtii semi-finalka UEFA Nations League ee Spain Arbacada.